Iintlanzi ezibomvu zomoya weetra | Ngeentlanzi
Los intlanzi ebomvu itetra yentlanziLuhlobo lwe-characid olunokulinganisa ukuya kuthi ga kwiisentimitha ezine ubude, lunentloko enkulu kunye nomlomo omkhulu kakhulu onemihlathi esezantsi ephuhle kancinci kunomhlathi ongasentla.
Ezi ntlanzi zibonakaliswa ngamehlo asetyhula, ane-iris ebanzi kunye nomfundi omkhulu omnyama. Umzimba wabo uthanda ukuba mde kakhulu, kodwa ngaxeshanye ucinezelwe kamva, banombala omhle kakhulu, ithoni ebomvu ebomvu, Ngeendawo ezimfusa kancinci ezothelekiswa nendawo esezantsi yesisu sakhe esisilivere. Kwangokunjalo, amaphiko azo, omabini angasemva kunye nalawa anal, anokukhula ngendlela eyothusayo, ukurhoxa kube yithoni ebomvu nebala elimnyama.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba phantom eyindodaBanomphetho omde othe tyaba kwaye ucocekile ngasemva kunabasetyhini, abathi, ukongeza ekubeni nombala obomvu kancinane ngeetoni ezimhlophe, bancinci kwaye babhityile.
Ukuba ucinga ezi zilwanyana kwi-aquarium yakhoKubalulekile ukuba uyazi ukuba bazilungelelanisa kakuhle nokutya ukutya okuthengwe kwiivenkile ezikhethekileyo, kuba ungabondla ngeeflakes okanye iiflakes ezazifakwe ngaphambili ngeminwe yakho. Nangona kunjalo, ukuba ukhetha, unokuxuba oku kutya komileyo kunye nentabalala yokutya okuncinci okukhoyo. Kwangokunjalo, zizilwanyana ezinentlalontle kakhulu, ezithanda ukuhlala ezikolweni, ke ngoko sicebisa ukuba ungafumani nje kuphela ezi zilwanyana, kodwa ubuncinci ngama-5 ngaphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Intlanzi ebomvu ebomvu